कारागार सुधार्दै कैदीबन्दी- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कारागार सुधार्दै कैदीबन्दी
जेष्ठ १२, २०७५ मोहन शाही
डोटी — कैदी–बन्दीप्रति समाजको धारणा सकारात्मक हुँदैन । उनीहरूको अनुशासन, इमानदारी र नैतिकताजस्ता व्यवहारमा शंका गर्ने चलन छ । डोटी जिल्ला कारागारका कैदी भने फरक छन् । उनीहरू लामो समयदेखि कारागारभित्र अनुशासन र इमानदारी हुनुपर्ने माग गर्दै उठाउँदै आएका छन् ।
कारागारभित्र कैदीलाई गरिने ब्यवहार र प्रशासनको ‘भ्रष्ट चरित्रमा’ सुधार आउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । कैदीका नाइके दिपेन्द्र जेठारा कारागारभित्रको वातावरणले कैदीहरूलाई सकारात्मकभन्दा नकारात्मक सोचतर्फ ढल्न बाध्य परिरहेको गुनासो गर्छन् ।
‘कारागार प्रशासनबाटै कैदीहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार आउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सजाय भुक्तानपछि समाजमा पुन:स्थापित हुने सहज वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ कारागारभित्रका साँघुरा कोठाहरू, दुर्गन्धित शौचालय, फोहोर भान्साले सास्ती भएको उनीहरूको गुनासो छ । खुला वातावरण, खेलकुदका सामग्री, ब्यायाम गर्ने साधनहरू नहुँदा स्वस्थ हुनुको साटो हरेक दिन रोगसंग लड्नुपरेको उनीहरूको दुखेसो छ ।
‘आवश्यक मानवीय ब्यवहार पनि हुँदैन कारागारभित्र,’ जबरजस्ती करणी मुद्दामा सजाय भोगिरहेका दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका भुवनसिंह दमाई भन्छन्, ‘अवहेलना गरिएका कारण आत्मग्लानिले हामी मरे सरह हुन्छौं, हाम्रो मात्र चरित्र सफा हुनुपर्छ भन्ने कल्पना गर्नु राज्यको मूर्खता हो कि ? कैदीहरूले सकारात्मक सन्देश दिने पाठ्यसामग्रीहरू, सीपमूलक तथा ज्ञानबद्र्धक तालिम, पारिवारिक वातावरण नभएको गुनासो गरेका छन् । ‘हामी अनुशासनमा बस्न नसकेकै कारण अपराधमा जानी नजानी फसेका हौं,’ एक कैदीले भने, ‘मानिस चाहेर यस्तो दुनियाँमा फस्दैन, परिबन्दले पर्ने हो । त्यसका लागि अनुशासन चाहिन्छ भन्ने बुझेर नै सरकारसँग माग गरिरहेका हौं ।’
‘संसार बदल्नु छ भने आफैंबाट सुरु गर्नुपर्छ’ भन्ने भनाइलाई ब्यवहारमा उतारिरहेका छन्, जिल्ला कारागार डोटीका कैदी दिपेन्द्रबहादुर जेठारा । ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा सजाय भोगिरहेका जेठारा डोटी बडीकेदार गाउँपालिकाका हुन् । उनी कैदीका नाइके छन् । उनले समाजसेवाको उदाहरण कारागारभित्रबाट सुरु गरेका छन् । फोहोर र साँघुरो भान्साकोठामा दाउरा बालेर खाना पकाउँदा कैदीहरूले भोगिरहेको समस्या उनले देख्न सकेनन् । घरबाट पैसा मागेर कैदीहरूलाई खाना पकाउन ६ वटा ग्यास सिलिन्डर र चुलो किनेर सहयोग गरे । चुलो र सिलिन्डर पाएपछि कैदी खुसी भए । ‘हामीलाई आगो बालेर खाना पकाउन निकै समस्या भएको थियो, धुवाँले बिरामी पनि हुने गरेका थियौं,’ बेचबिखनको मुद्दामा सजाय भोगिरहेका बझाङका सुदिप भण्डारीले भने, ‘जेठाराले ठूलो सहयोग गरे ।’ आगन्तुकसंग गर्नुपर्ने ब्यवहारबारे पनि जेठाराले सिकाउने गरेको अर्का कैदी महासिंह कुँवरले बताए ।
सुधारगृह बनाउने लक्ष्य
डोटी कारागारका कैदी सजाय भुक्तान गरिसकेपछि कारागार सुधारकै अभियानमा लाग्ने बताउँछन् । नेपालमा कानुनी रूपमा कारागारलाई सुधारगृह उल्लेख गरे पनि ब्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको उनीहरूले बताए। दिपेन्द्र जेठारा जेल जीवनपछि सामाजिक अभियान चलाउन चाहन्छन् । देशभरका कारागारलाई व्यावहारिक रुपमा सुधारगृहका रुपमा परिणत गर्ने उनको धोको छ।
प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७५ ०९:३५
वैशाख ३१, २०७५ मोहन शाही
डोटी — कामको खोजीमा १४ वर्षको उमेरमा भारत पसेका थिए, डोटीका धर्मसिंह धामी । कमजोर आर्थिक स्थिति त्यसैमा पनि मुटुको भल्भ नै फेर्नुपर्ने अवस्थाका बिरामी । जति सहज सम्झेका थिए भारतको मजदुरी पेसा, त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी उनले दु:ख झेले ।
सतनाम फुड प्रोडक्सनमा काम गर्दै धर्मसिंह धामी । तस्बिर: मोहन
मुटुसम्बन्धी रोगी भए पनि उनको आत्मबल र पौरखी स्वभावले विगतको अवस्थाले अहिले फन्को मारेको छ । अहिले उनी आफ्नै जिल्लामा उद्योगीका रूपमा स्थापित भइरहेका छन् । केही परिवारको गुजारा चलाउन सक्ने रोजगारदाताका रूपमा उभिएका छन् । विगतमा शारीरिक र आर्थिक अवस्थाबाट दिक्क हुनेहरू आजभोलि उनको प्रगति देखेर इष्र्या गरिरहेका छन् ।
४७ वर्षको उमेरमा आइपुग्दासम्म समाजमा बेग्लै पहिचान त्यसै बनेको भने होइन । सयौं घटना परिघटना मिसाएर सफल कथा बनेको छ, उनको जीवन । जिल्लामा स्थापित भएको सतनाम फुड प्रोडक्सनका मालिक भइसकेपछि भावुक मुद्रामा संघर्षका घटना सम्झँदै उनले यसरी सुनाए आफ्ना कथा व्यथा ।उनले १४ वर्षसम्म भारतमा मजदुरी गरे ।
कहिले चौकीदारी, कहिले कम्पनीमा त कहिले मजदुरीको काम गरे । सामान्य लेखपढ गरेका उनले मजदुरीबाहेक अरू काम पाउन सकेनन् । मजदुरी गर्दागर्दै बिहे पनि गरे । भारतको झारखण्डमा माइत भएकी अनिताले धामीलाई जीवनसाथीका रूपमा साथ दिइन् । अनिता पनि मजदुरी गर्थिन् । मजदुरका दु:खपीडा अनिताले पनि नजिकबाट नियालेकी थिइन् । दुवैको कमाइ जोडेर पनि धर्मसिंहको उपचार खर्च जुटाउन मुस्किल भयो । मुटुको भल्भ फेर्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि गतिलो आम्दानी धामी दम्पतीले गर्न सकेनन् ।
भारतको मजदुरीले नपुग्ने भएपछि धामी निराश भएर डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको वनलेक थप्सास्थित घर फर्के । फर्किंदा अनितालाई पनि सँगै ल्याए । दुवैले गाउँमै सानो पसल खोले । प्रगति खासै भएन । उधारोले गाउँको व्यापार फस्टाएन । तरकारी खेती गरे । बजार नहँुदा फलेका तरकारी पनि बारीमै कुहिए ।
के गर्ने, कसो गर्ने ? धामीको दम्पतीलाई समस्या र चुनौतीले थिच्न थालिसकेको थियो । तर पनि दुवैले हिम्मत हारेनन् । मागी खानुभन्दा गरी खानु जीवनको मूल मन्त्र थियो । दुवै जना ०५६ सालमा साबिकको क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको दिपायल राजपुरमा नास्ता पसल खोल्न आए ।
भारतको मजदुरीदेखि गाउँसम्मको संघर्षले अब व्यापार कसरी गर्ने भन्ने अनुभव धामी दम्पतीले बुझिसकेको थियो । राजपुरमा केही नयाँपन ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचे । सानो टिनको छाप्रो बनाएर उनले धनगढीबाट चाउमिन ल्याएर पकाउन सुरु गरे । त्यतिबेला डोटीमा चाउमिन पकाउने पसल थिएनन् । पसल नजिकै विद्यालय थियो । सुरु सुरुमा बेग्लै स्वाद भएकाले नास्ता पसल सानै भए पनि फस्टायो । तर धनगढीबाट चाउमिन ल्याउँदा ल्याउँदै कुहिने, सड्ने र खराब हुने समस्याले उनी चिन्तित भए । बरु केही महिनापछि उनले पलियाबाट चाउमिन बनाउने मेसिन किनेर ल्याए ।
मेसिन किनेर त ल्याए दु:ख भने हटेन । राति दुई बजे उठेर चाउमिन बनाउनुपर्ने भो । एक किलो चाउमिन तयार गर्न दुई घण्टा काम गर्नुपर्ने भो । सानो मेसिन भएकाले थोरै उत्पादन भए पनि ग्राहकले सन्तुष्टि लिन थाले । व्यापार बढ्न थाल्यो ।
उनले यतिले मात्र चित्त बुझाउन सकेनन् । जिल्लाका अन्य ठाउँमा पनि चाउमिनको व्यापार बढाउने सोचमा लागे । उनले २ लाख मूल्य पर्ने ठूलो मेसिन किनेर ल्याए । त्यसबाट चाउमिन उत्पादन बढ्यो । उनले जिल्लाभरि सतनाम चाउमिन नाम दिएर होटलमा पुर्‍याउने काम गरे । ‘अन्य होटल व्यवसायीले पनि उनलाई साथ दिए । मैले ताजा, सफा र शुद्ध चाउमिन दिएपछि सबै होटल व्यवसायीले मेरो चाउमिन राखिदिनुभयो,’ धर्मसिंह धामीले खुसी प्रकट गर्दै भने, ‘बाहिरबाट आयात हुने चाउमिन ठप्प भयो, मेरो ब्रान्ड जिल्लाभरि फैलियो ।’
चाउमिनको व्यापारसँगै उनले ०६९ सालमा ससको पनि कारोबार सुरु गरे । उनले आफैं सस बनाएर बेचे । ससको कारोबारले सानो छाप्रोमा रहेको उनको व्यवसाय साँघुरो हुन थाल्यो । माग बढ्दै गए पनि उनी आपूर्ति गर्न नसक्ने भए ।
प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७५ ११:१६
जिप धकेल्दै यात्रु
खानेपानी योजना बजेट अभावमा अलपत्र
अनमी भर्ना दुई दिन मात्रै
छाडा चौपायाले किसान हैरान
डल्फिनसँगै गोही बढ्दै